July 2009 - शखदा साहित्य
11:43 AM कथा
मेरो पाणिग्रहण आजभन्दा दुई वर्षगाडि भएको थियो । नयाँ वर्षँगै मैले मेरो जीवनको नयाँ उमङ्ग र आकर्षा प्राप्त गरेकी थिएँ । सामाजिक परम्परागत रितिथितिको र्समर्थन गर्दै मेरो विवाह सागरसँग भएको थियो । शिक्षित, सुन्दर र दाइजोले सजिएकी बुहारीपात्र भेट्टाउँदा सागरका सबै सदस्य रमाएका थिए । अझ मैले नब्बे ड्रि्रीबाट घोप्टिएर खुट्टामा ढोगिदिँदा त झन् 'सौभाग्यवती भएस्' 'चाँडै छोराको आमा भएस्' भन्ने आशावादीले टन्न अघाइसकेकी थिएँ । कुनै विदेशी संस्थामा तलबस्केल पनि राम्रै भएको बाबुआमाको प्रिय कान्छो छोरालाई पतिको रूपमा भेट्टाउँदा म पनि खुसी नै थिएँ । त्यसमाथि उसका दिदीहरूले र भाउज्यूले नाता जोड्दै प्रशंसाको बाढी बगाइदिँदा त झन् म चुर्लुम्म डुबेकी थिएँ । एउटा आदर्श पत्नी र बुहारीमा हुनुपर्ने गुणलाई सबैतिरबाट मलजल गरिदिएर सिँचिदिएका थिए । यसै मौलाएको वृक्षमा घरपरिवारले सियाँल लिएका थिए । बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म आनन्दले सुस्ताउने गर्दथे । विवाह गरेको पहिलो रातमै सागरले भनेको थियो-'आमाको खुट्टामा तेल लगाइदियौ, सायद गोडा लगाउनु भन्छन् होला हैन -' म यन्त्रवत् कम्प्युटरचालित मेसिनझैँ सासू अनि आमाजूको खुट्टामा तेल लगाउन गएकी थिएँ । म जाँदा मेरो कोठामा सजिएका मसँगै आएका विदेशी हजारौँ रूपैँया पर्ने सामानहरू हाँसिरहेका थिए ।
केही दिनपछि दुल्हन फर्काइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि सम्धी-सम्धिनी भेटघाट गर्न भनेर मेरा माइतका पाँच, छजना बाआमासहित अन्य व्यक्तिहरू आउनुभयो । भेटघाटको कार्यक्रममा मेरा माइतका आइमाई-खलकले मेरो सासूको खुट्टा र लोग्ने मान्छे-खलकले मेरो ससुराको खुट्टामा ढोग्नुपर्ने थियो । यो सागरहरूको परिवारमा चलिआएको रीत हो भनियो । यो रीतलाई अस्वीकार गर्ने कसैले हिम्मत गरेनन् । यो अनौठो रीतले मेरा माइतकाहरूको मस्तिष्कमा करेन्टको झट्का परेझैँ झन्झनाएको थियो । तर छोरीले दुःख पाउली भनेर सबैजनाले त्यो रीतलाई हाँसीहाँसी स्वीकारेका थिए । यसै संस्कारमा हुर्केको सागरलाई कुनै असर परेको थिएन । तर मेरो अन्तरआत्मामा असन्तुष्टको ज्वारभाटा क्षणमा नै उठेर क्षणभरमा नै शान्त भएको थियो ।
चाँडै नै बुहारीपात्रको भूमिका बीचैमा रोकिने भयो । किनभने म सागरसँगै काठमाडौँ जानुपर्ने भयो । उसको एक महिनाको बिदा सकिइसकेको थियो । सुरुमा म काठमाडौँ जान पाउने हुँदा खुसी नै थिएँ । तर काठमाडौँ आएपछि यहाँको कोलाहलपूर्ण जीवन, व्यस्तता र दूषित वातावरणसँग म दिक्क भएँ । डेराको एक्लोपना र आफन्तदेखि धेरै टाढा भएकाले म आफैँभित्र हराइसकेकी थिएँ । सागरको ड्युटी असाध्यै व्यस्त थियो । बिहान ८ बजेदेखि बेलुकासम्म अफिसमा नै बित्दथ्यो । बिदाको दिनमा पनि उसको आफ्नै अफिसको हिसाबकिताब मिलाउनुपथ्र्यो । उसको बाबजुद पनि ऊ घरमा कुनै कुराको कमी हुन दिँदैनथ्यो । एउटा आज्ञाकारी पति भएर ऊ मेरा लागि जे पनि गर्न तयार रहन्थ्यो ।
मैले एकाकीपनलाई मिल्काउन जागिरको तलास गर्न थालेँ । तर मात्र आइए पास गरेकोले यो समयमा जागिर पाउनु असम्भवप्रायः नै थियो । त्यसपछि मैले क्याम्पस पढ्ने विचार गरेँ । जसमा सागरको पनि र्समर्थन थियो । नेपाली विषय लिएर त्रि-चन्द्रमा बीए पढ्न थालेँ । क्याम्पसऴ जाँदाजाँदै मेरो कृष्णसँग परिचय भयो । ऊ पनि त्रि-चन्द्रमा बी.ए.को दोस्रो वर्षा पढ्दै थियो । क्याम्पस जाँदा भेट नभए पनि फर्किँदा भेट हुन्थ्यो । एउटा विवाहित स्त्रीसँग गर्नुपर्ने आदरभाव उसले मसँग राख्थ्यो । कृष्ण हाम्रो डेरामा पनि आउने गर्दथ्यो । मैले सागरसँग उसको परिचय गराइदिएकी थिएँ । कृष्णको व्यक्तित्व साह्रै प्रसंशा गर्न लायक थियो । एकपल्ट भेट भएपछि उससँग नरिझिने सायद कोही थियो होला । कृष्णसँग मेरो काम परिरहन्थ्यो । एउटै क्याम्पस र एउटै विषय परेको हुनाले उसँग नोटकापी र प्रश्नपत्रहरू माग्नु पर्दथ्यो । जहिले पनि उसको हँसिलो अनुहारले मलाई सहयोग गर्न स्वागत गर्दथ्यो । उसको हँसाइ र बोलाइमा मैले अर्कै अनुभूति प्राप्त गरेकी थिएँ । उससँग मेरो साहित्यसम्बन्धी वादविवाद पनि चल्थ्यो । ऊ आफ्नो तर्क राम्ररी केलाएर दिन्थ्यो । जसमा मैले हार मान्नुपथ्र्यो । ऊ नारीसम्बन्धी धारणा यसरी पोख्दथ्यो मानौँ ऊ नारी मुक्तिको प्रमुख योद्धा नै हो । उसको कुरा सुनेर म यति प्रफुल्लित हुन्थे कि म अज्ञानताको ठूलो खाडलबाट धेरै माथि आइसकेको छु जस्तो आभास हुन्थ्यो मलाई । ऊ मेरो विचारधारालाई यसरी परिवर्तन गर्दैथ्यो कि मानौ बषौं अगाडिको रुढिवादी विचारधारामा रुमल्लिएकी म र मेरो परिवेशलाई नयाँ बाटो देखाउदैथ्यो । ऊ भन्थ्यो- 'नारी समाज हो र समाज नै नारी हो, नारी विना समाज हुनसक्दैन । पुरुषहरू ठूल-ठूला सिर्जनात्मक कार्य गर्दछन् , पुरस्कार प्राप्त गर्दछन् । तर के नारीले जस्तो एउटा सजीव सिर्जना गर्न सक्दछन् - ऊ त मात्र निर्जीव वस्तुलाई सजीव देखाउन खोज्दछ । अनि उसका सिर्जना गर्ने हातहरू नारीको रगतबाट नै बनेका हुन्छन् ।' उसको कुराबाट म धेरै प्रभावित भइसकेकी थिएँ । हुन पनि हो नारीको समाजमा कुनै महत्व र अस्तित्व नै छैन । समाजमा रहेको नारी पुरुष बीचको असमानताको खाडललाई मैले देखेकी नै रहेनछु । पुरुषप्रधान समाजमा हुर्केकी म अवलाले यस्ता धेरै चोटहरू मैले हाँसि-हाँसि स्वीकारी सकेकी मैले सम्झना गर्न थालेँ । मलाई सागर र कृष्णमा तुलना गर्न मन लाग्छ । मैले दुईजनाको बीचमा धेरै लामो दुरी भेट्टाए र त्यो दुरी बीचमा रुमल्लिएकी म एउटा निरूपराय अवला भौतारिरहेकी थिएँ ।
यस्तैमा सागरलाई शहर बाहिर फिल्ड जानुपर्ने भयो हप्तादिनको लागि । ऊ गएपछि मैले आफूलाई साह्रै एक्लो महसुस गर्न थालेँ । तर दिनहरू काट्नुपर्ने नै हुन्छ र समयहरू बिताउनका लागि नै हुन्छन् । एक्लो समय कष्टपूर्ण र त्रासदियुक्त हुँदो रहेछ । यसै एक्लोपनाले मलाई बिरामी बनायो । म बिरामी भएको कसरी हो कृष्णले थाहा पाएछ । उसको आगमनले मलाई केही हलुको महसुस हुन्छ । उसले मलाई ज्वरोको औषधि किनेर ल्याइदियो । ज्वरो केही कम भयो । राती फेरि ज्वरो आएमा बोलाउनु भन्ने सल्लाह दिएर ऊ गयो । राती ज्वरो आयो तर मैले बोलाउन उचित ठानिनँ किनभने म एउटा परस्त्री भएर आफ्नो मर्यादाको सिमारेखा आफै कोर्नुपर्दथ्यो । कतै कथा उपन्यासमा भए जस्तै मेरो जीवन भयो भने । तर्सथ मैले सागरको अनुपस्थितिमा कृष्णसँग बढी हेलमेल नगर्ने विचार गरेँ । म आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा कुनै खोट लगाउन चाहन्नथेँ । किनभने सागरमा पनि खासै त्यस्तो कमी केही थिएन, मात्रै उसँग पितृसत्तात्मक समाजले हस्तान्तर गर्दै आएको नारीप्रतिको रुढिवादी धारण।ले भरिएको विचारधारा थियो । तर यसले परिवर्तन हुनै पर्दछ । तर परिवर्तन भन्ने कुरा कसैले जबरजस्ती गरेर हुँदैन । यो त आफैँ अन्तरआत्मादेखि प्रेरित भएर आउनुपर्दछ ।
भोलिपल्ट कृष्ण फेरि आयो । मलाई ज्वरो आउन नछोडेकोले क्लिनिक जाने सल्लाह दियो उसले । मैले उसको सुझाव नकार्न सकिनँ । उसको सहयोगमा म चेकअप गराएर फर्केँ । कोठामा हामी दुई मात्र थियौँ । ऊ धेरै बेर सम्म बोलेन । किनभने डाक्टरले 'तपाईँ वहाँको 'को -' भन्ने प्रश्नमा कृष्णले जवाफ दिन सकेको थिएन । आफ्नो विद्धत्व कुराले सबैलाई लठ्याउने कृष्णले डाक्टरको सानो प्रश्नमा जाडोले कक्रेको भेडाजस्तो भएको थियो र मैले नै जवाफ दिएकी थिएँ 'छिमेकी' भनेर ।
कृष्ण धेरैबेरसम्म मेरो कोठामा बस्यो । ऊ किताब पढिरह्यो र म सुतिरहेँ ।
मैले नै मौनता भंग गर्दै भनेँ- 'कृष्णजी तपाईले मलाई यति धेरै सहयोग गर्नु भएको छ । यसको बदलामा म तपाईँलाई के दिऊ, तपाईँको ऋणको भारले म थिचिएकी छु । कृपया मलाई मौका दिनोस् ।'
'यो त मात्र संयोग हो । कसैले सहयोग गर्छु भन्दैमा गर्न सकिन्न । यो जीवनयात्राको किताबमा सायद तपाईँलाई सहयोग गर्नु पर्छ भनेर कुनै पानामा लेखिएको रहेछ । यसैले होला तर तपाईँ ऋण नसम्झनोस् ।' मैले उसको अन्तरआत्माको भाव बुझ्न पुनः प्रश्न गरे 'मानिस स्वार्थी हुन्छन् भन्छन् नि तर तपाईँ त मलाई कुनै स्वार्थविना नै सहयोग गरिरहनु भएको छ ।'
उसले उत्तर दियो- 'सबै व्यक्ति स्वार्थी हुन्छन् नै भन्न सकिन्न । मेरो पनि कुनै स्वार्थ छैन । तर एउटा कुरोचाँहि अवश्य लुकेको छ ।'
उसको यही लुकेको यथार्थ मलाई थाहा पाउने इच्छा थियो । 'कृपया के कुरा लुकेको छ भनिदिनु होला म कृतज्ञ हुने थिएँ ।'
उसले गम्भीर भएर भन्यो 'सायद तपाईँ अविवाहिता हुनुहुन्थ्यो भने ।'
उसको उत्तरले मलाई रिगंटा लाग्यो, म आत्तिएँ । किनभने मनस्थितिलाई परिस्थितिले साथ दिएमा नसोचेको कुरा पनि हुन सक्दछ । मेरो हडबर्डाई देखेर कृष्णले पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्‍यो र जाने अनुमति माग्यो । मैले पनि टाउको हल्लाएँ मात्र ।
पर्सिपल्ट सागर फिल्डबाट फर्कियो । म निकै ठीक भईसकेकी थिएँ । मैले आफू विमारी भएको र कृष्णले सहयोग गरेको कुरा गरेँ । सागरले आफूसँग सरुवाको पत्र पनि लिएर आएको रहेछ । सागरसँगै मेरो पनि सरुवा भयो । मैले जानेबेलामा कृष्णलाई भेटे 'हामी जाने' भन्दा उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । मैले कृतज्ञता प्रकट गरेँ । उसले औपचारिकता पूरा गर्‍यो मात्रै । तर म भने उसको विचारधाराले परिवर्तित मन लिएर केही गर्ने अठोट लिएर अघि बढेँ ।
यो कुन लीला हो ?
6:16 AM लघुकथा
'सर आज अलिक चाँडो घर जानुपर्‍यो, छोरा बिमारी छ ।' रामबहादुर पिताको दायित्व पोख्दछ । 'हेर्नोस्, रामबहादुरजी ! हामीले अफिसको दायित्व पनि बुझ्नुपर्‍यो । मैले देखिरहेको छु, धेरै दिनदेखि तपाई छोरा बिमारी भएर डिर्स्र्टब भइरहनुभएको छ । हामीले हाम्रो ठाउँबाट अफिसको जिम्मेवार काम बोकेका हुन्छौँ । यसरी डिर्स्र्टब भएर कहाँ हुन्छ र ? '- हाकिम हाकिमी दायित्व पोख्दछ ।
'होइन सर, मैले छोरा बिमारी भएर अफिसको काममा कुनै लापरबाही गरेको छैनँ । उत्तिकै इमान्दारीका साथ गरिरहेको छु । मात्रै यो हो कि अलिक छोराको बिमारी बारे अफिसमा चर्चा गर्छु के गर्नु, बिमार पत्ता लागेन, धेरै दिन भइसक्यो, कसैले 'यो बिमार हो' भनेर भनिदिन्छ कि भनेर सोधीखोजी गरेको हो । छोरा बिमारी भएर मैले कहिल्यै बिदामा पनि बसेको छैन सर उ'
'त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ? मेन्टली डिर्स्र्टब होइन्छ नि, यहाँ उपचार भएन भने बाहिर लानुहोस्' ? हाकिम मानवीयता जताउँछ ।
'के गर्नु सर, कहिले अफिसमा क्लोजिङको समय पर्छ, कहिले हातमा पैसा हुँदैन । कहिले बिमारी नै निको भएजस्तो भैदिन्छ, त्यसैले लान ढिलो भएको हो सर ।'- रामबहादुर रुन्चे स्वरमा व्यक्त गर्छ ।
'आज अफिसको जरुरी मिटिङ छ । त्यसैले घर जान मिल्दैन रामबहादुरजी ! म हाकिम, तपाई कारिन्दा, सबैको आ-आरुनो ठाउँमा कामको महत्व उत्ति नै हुन्छ । होइन र ?'
रामबहादुर सहमतिको टाउको हल्लाउँदै बाहिर निस्कन्छ । केही समयपछि मिटिङ सुरु हुन्छ ।
र्सवप्रथम हाकिमको भाषण सुरु हुन्छ- 'हेर्नोस् आजको यो मिटिङ असाध्यै महत्वपुर्ण छ । हामीले मुख्यमुख्य बुदाँमा डिस्कस गर्नु छ । हामीले हाम्रो अफिस कसरी राम्रो बनाउने र यसलाई कसरी घुसखोरी र कमिसनखोरीबाट मुक्त बनाउने ती उपायहरू सोच्नुपर्‍यो र फेरि हामीले हाम्रो घरको व्यावहारिक कठिनाइहरू छोडेर अफिसको काममा एकचित्त भई काम गर्नुपर्‍यो । हामीले हाम्रो दस बजेदेखि पाँच बजेको समयमात्र अफिसलाई दिएका छैनौँ, हामीले हाम्रो सम्पुर्ण मानसिकता अफिसको प्रगतिको लागि खर्चनुपर्‍यो । होइन र ?.......।'
यत्तिकैमा मोबाइलको घन्टी बज्छ । मिटिङको सम्पुर्ण शक्ति फोनमा एकीकृत हुन्छ । 'हेलो, हो ! ए, ! हो, - भमिट - ए. ल- हुन्छ त ।' फोनमा बोलिसकेपछि हाकिमको अनुहार एक छिन अँध्यारो हुन्छ । सबैजना हाकिमप्रति उत्सुकताका नजरले साथ हेर्छन ।
'हेर्नोस्, साथी हो ! अहिले मेरो छोरा भोमिट गरेकोगर्‍यै भएछ मैले घर नगई भएन, के गर्नु, यस्तो महत्वपुर्ण मिटिङ पोस्टपोन्ड गर्नुपर्‍यो । मलाई यसप्रति ठूलो खेद छ । हामी फेरि कुनै दिन समय अनुकूल मिलाएर बस्नेछौँ । हुन्न र -' - सबैजना अनुत्तरित मुखामुख गर्छन् ।
भोलिपल्ट, सबैजना हाकिमको छोराको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै अफिसमा बसेका हुन्छन् । हाकिमको आगमन हुन्छ । सबैजना अभिवादनपश्चात् चूप लाग्छन् । एकजना हाकिमसँग अलिक बढी नजिक हुने कारिन्दा छोराको स्वास्थ्यबारे सोध्छ । हाकिम गम्भीर भएर भन्छ्- 'ए, मेरो छोराको स्वास्थ्य - ठीकै छ । हिजो त्यो आमाचाहिँ बजार जाँदा रुँदा-रुँदागरेछ अनि भोमिट गरेछ, ठूलो घटना त केही भएको रहेनछ । म पनि सुरुमा आत्तिएँ तर सामान्य रहेछ । के गर्नु, सबैभन्दा पहिला आरुनो परिवारप्रतिको दायित्व र भावनालाई मान्यता दिनुपर्दो रहेछ । होइन त रामबहादुरजी -'
रामबहादुर तीनछक्क पर्छ । रामबहादुरले त्रेतायुगमा रामलीला द्वापरयुगमा कृष्णलीला सुनेको, पढेको त थियो तर कलियुगमा आएर यो कुन लीलासँग उसले साक्षात्कार गर्नु परिरहेछ, उसले थाहा पाउनै सकेन । नत्र भने उसले आफ्नो छोराको नाम कृष्ण नराखेर त्यो लीलासँग मिल्ने नाम राख्थ्यो होला ।
8:34 AM बालकथा, बालसाहित्य